Ndị na-eme biya na-eme wort, yist na-eme biya-News-Ningbo COFF Machinery Co., ltd
LLỌ AKW ARKWỌ ARON: E Nwere ọtụtụ ihe ọmụma ị nwere ike ghara ịma n'ịgba mmiri
Red Ale (ọka bali)
G'SN THE B THE IHE Dị IHE N’AGH WA WKA A AND W NA BERE B AND
ND TIMỌD ON NA BREWERY akụrụngwa MAINTENANCE
Ndị na-eme biya na-eme Wort, Yist Na-eme Beer
Oge: 2020-07-10 ikwu: 1
Lager brewer ga-abụ nka na ụzụ na enweghị mgbaghara, ebe ndị na-eme ihe taa na-anara ihe ịma aka ahụ ma were tankị ndị na-adịghị ala ala, bụ nke a na-ahụkarị na ebe a na-eme biya nke nnukwu akara ụwa, iji mee ka yist ha nwee obi ụtọ.
A na-etinye tankị na-enwu gbaa / tankị na-egbuke egbuke n'ime ụlọ ahụ na-erughị oke. Savechekwa ụfọdụ ohere tankị nwere ike arụnyere n'ọtụtụ ọkwa iji bulie ọnụ ọgụgụ nke tankị. Emekarị ị pụrụ ịhụ ya na Europe n'ihi ochie ụlọ na elu mbipụta.
Ntughari uzo nke uzo achicha achicha achicha putara na odi obere ka ezighi ezi zoo n'azu, na ezighi ezi n'usoro ihe eji eme biya ma obu ihe ndi ozo na-adi elu.
Dika udiri udiri ahihia na-ewu ewu, ufodu ndi na emeputa ihe na-ele anya oge a nwalere iji nyere aka mee ka ngwa ngwa megharia yist ha. Kama ntụ oyi na-adịghị na igwe anaghị agba nchara-cylindroconical fermentation arịa ma ọ bụ "unitanks", brewers na-atụgharị lagering adọ n'akụkụ ya, n'ụzọ nkịtị. Ugbo ala a na-ahụta ụlọ na-achọta ụlọ na obere ebe a na-eme biya.
Clike Ebe a iji kpọtụrụ anyị.
Previous: Usoro Mmepụta maka iwu na Japan
Ọzọ: Onye ọbịa nke Japan ga-enweta ngwongwo nke tankị biya na-agba agba na tankị gbaa ụka
Na nchikota nke Coff zutere ...
Nkwuputa ahia maka akpo ...